Iphupha leChaplet Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi Online ➡️
Igama le-godfather okanye i-godmother lisuselwa kwigama lesi-Latin elithi "pater spiritualis" okanye "patrinus", elithetha into efana no "tata wokomoya" okanye "utata omncinci."
Ukuthatha inkxaso-mali kuhlala kungumbeko kumabandla obuKristu namhlanje. Kwelinye icala, u-godfather ungqina ngobhaptizo luka-godson wakhe esibingelelweni. Kwelinye icala, uthembisa ukuthatha inxaxheba ekukhuleni kobuKristu kwalomntwana kwaye amxhase kunye nabazali bakhe ekufumaneni inkolo yakhe. Abantu abathatha inkxaso-mali eqinisekisiweyo yecawa bakwabizwa ngokuba ngoothixo okanye oothixo.
Kukwasoloko kucingelwa ukuba uxanduva lokukhathalela umntwana ngokuzenzekelayo ludluliselwa koothixo babazali ukuba abazali babo basweleke ngaphambi kwexesha. Nangona kunjalo, le ngcinga isekwe kwimikhwa eyadlulayo.
Namhlanje ingqikelelo yokugcinwa komntu kufuneka igqitywe kumyolelo. Nokuba uqikelelo lweofisi yenkxaso-mali kufuneka luthathelwe ingqalelo ngononophelo, namhlanje abazali nabaxhasi bathatha isigqibo kunye ukuba kubaluleke kangakanani kule ofisi. Nangona kunjalo, icawa kufuneka ihlangane neemfuno ezithile ukuze ibe ngumxhasi.
Ukutolikwa kwamaphupha kuchaza kolu papasho lulandelayo ukuba yeyiphi intsingiselo anokuthi abe nayo u-godfather kwinqanaba lamaphupha:
1 Uphawu lwephupha «godfather» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «godfather» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «godfather» - ukutolika ngokomoya
Uphawu lwephupha «godfather» - ukutolikwa ngokubanzi
Ephupheni kusenokwenzeka ukuba uzibona ungutata okanye uthixokazi, nangona ungekathathi le ndima kubomi bokwenyani. Ukutolikwa kwamaphupha, kukho umbuzo wokuba ngaba kukho imisebenzi ephupheni okwangoku, afuna ukuyizalisekisa ngokungathandabuzi okukhulu, kodwa engaboni ukuba kunokwenzeka ukuwaphepha.
Ukuba ngumphathi ephupheni kunokuqhubeka inkcitho engalindelekanga kwimali ukwazisa. Kwixesha eliphakathi kunokubakho nobhaptizo endlwini, olunokuthi ngephupha lize nombuzo wenkxaso. Apha kuya kufuneka uzive ukhathalele kakhulu ngaphakathi kuwe kwaye wamkele esi sinyanzelo kuphela ukuba unako ukuxhasa lo msebenzi ngentliziyo yakho yonke.
Konke malunga nokuxhomekeka kunye nokuthembela xa omnye umntu ethatha indawo yokuba nguthixo ephupheni. Ukuba uyamazi umntu, akufuneki uthandabuze ukumthemba lo mntu kwaye unenkxaso yakhe. Ukuba kubuzwa umntu ngaphakathi el mundo yamaphupha athatha inkxaso-mali yomntwana, ngokoluvo lweetoliki ngokubanzi, oku kuzakutsala eli phupha kungekudala. okuhle kodwa kumanyano lomtshato.
Ukuba umntu oleleyo uthatha inkxaso yezilwanyana kumyezo wezilwanyana ephupheni lakhe, angazilawula kakuhle iinkanuko zakhe, kodwa kufuneka afunde ukuvumela iminqweno yakhe iqhubeke ngokukhululekileyo amaxesha ngamaxesha. Inkxaso yomthi ngokubanzi ibonakalisa ukusondela kwendalo kwaye amandla ibalulekile kumntu oleleyo. Ukuba ngumama okanye uthixo wesixeko esithile kubonisa njengephupha lokuba umntu uyakuthanda ukuthatha inyathelo ekuhlaleni.
Uphawu lwephupha «godfather» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, umfanekiso wamaphupha "u-godfather" uhlala ebonisa Izitya kunye nomlingane osweleyo. Ngokunokwenzeka, iphupha likwimeko enzima kwaye lilangazelela umntu onothando ecaleni kwayo.
Ukuzibonela njengo-godfather ephupheni kunokukukhuthaza ukuba uphucule eyakho. Usebenziso umbuzo kanye. Ngaba uhlala uhlala ukulungele ukunceda nabanye abantu? Okanye ngaba oku kulula nje kuthi ngabantu esibathandayo nesiziva sinxibelelene nabo ngendlela eqhelekileyo?
Ngamanye amaxesha ukuba luncedo kukwafuna ukulungela ukuphuma kwizithunzi kwaye woyise naluphi na ucalucalulo umntu anokulugcina.
Uphawu lwephupha «godfather» - ukutolika ngokomoya
Isithixokazi okanye uthixokazi ovela kwilizwe lamaphupha, ukusuka kwindawo yokugqitha yokujonga ukutolika kwamaphupha, luphawu lwesidingo ukukhuselwa ngokomoya.